Pyrenees: njirimara, nhazi, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ugwu ndị ama ama na-eme mgbochi n'okike n'etiti France na Spain. Ọ bụ ihe gbasara Pyrenees. Ọ bụ ugwu ugwu na-ekewa na mmiri Iberian na Europe ndị ọzọ. Ha bụ otu n'ime ugwu ndị a kacha mara amara na Europe niile na otu n'ime ugwu kachasị pụta ìhè n'ụwa. A maara ya site na aha Pyrénées na French, Pirineus na Catalan na Pirinioak ma ọ bụ Auñamendiak na Basque.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido, ahịhịa na ahịhịa nke Pyrenees.
2 Nhazi na ihu igwe nke Pyrenees
3 Ifuru na anụmanụ nke Pyrenees
Ọ dị na ndịda ọdịda anyanwụ Europe na mpaghara a dum gụnyere obere mba Andorra. Aha ugwu a sitere na Pirene onye bụ ada eze na akụkọ ifo ndị Greek onye Hercules hụrụ n'anya. Ka oge na-aga, ugwu ndị a na-enwetawanye mkpa na ịdị mkpa na ọdịbendị nke ndị bi gburugburu. Ọbụghị naanị na akụkọ ha, kamakwa na mmemme ha. Ọ bụ omenala na Pyrenees ka ha na-ata ahịhịa dị na ya A na-esi ehi na-ebugharị ehi n’elu n’elu ugwu n’oge ọkọchị.
Taa, anyị maara na akụkụ Pyrenees abụọ bụ ebe ama ama maka egwuregwu na ịrị ugwu. Mpaghara eji echekwa nke nwere otutu osisi na umu anumanu. Na France enwere Ogige Ntụrụndụ Pyrenees nke nwere ọchịchị nchekwa gburugburu ebe obibi ka elu. Ihe ezubere ichebe bụ akụnụba nke gburugburu ebe obibi dịka okike dị ka o kwere mee.
N’ugwu nile, enwere ya ihe kariri elu 50 nke kariri mita 3.000 n'ogologo. Ugwu ugwu nwere ngụkọta ogologo nke ihe dịka 491 kilomita n'etiti France, Spain na Andorra. Ejiri agbụ abụọ na-aga n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ site n'ebe ugwu nke Oké Osimiri Mediterenian ruo Bay nke Biscay. Enwere ike ịsị na usoro usoro ugwu niile bụ ihe kwụ ọtọ. E kewara ya na mpaghara 3: ọwụwa anyanwụ, etiti na ọdịda anyanwụ.. A na-ahụkarị ọnụ ọgụgụ kachasị elu na ngalaba etiti.
Ọnụ ọgụgụ kasị elu bụ Aneto nke dị elu nke mita 3.404. Onye na-esote ya bụ Posets peak, yana mita 3,375 nke elu, na Monte Perdido, nke ịdị elu ya bụ mita 3,355. N’adịghị ka ugwu ndị ọzọ dị n’ụwa ndị nwere ego ndị yiri ha, mmepe kpụkọrọ akpụkọ adịtụ obere. Enwere ụfọdụ na mpaghara ọdịda anyanwụ na etiti mana enweghị nke ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ ezie na ọ kwụsighị ike, ogo snow nwere ike ịdị iche dịka ebe ahụ. O nwere ike iru mita 2.700 karịa elu oke osimiri.
Ha bu ugwu nwere otutu akuku ma osimiri toro ogologo anaghi a draacha ya. Ihe pụtara ìhè na Pyrenees bụ na ha nwere ọtụtụ ọgba na ala mmiri.
Nhazi na ihu igwe nke Pyrenees
N'etiti etiti Pyrenees anyị hụrụ ihu igwe oyi na oyi. Agbanyeghị, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ anyị nwere oge ọkọchị nke na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Akụkụ ọdịda anyanwụ na-emetụta oke ikuku mmiri na-esite na Atlantic Ocean. Kemgbe ọtụtụ afọ, mbuze nke ihe ndị dị iche iche banyere mmiri na enweghị ịdị adị nke nnukwu kpụkọrọ akpụkọ na-eme ka o doro anya na ugwu ndị ahụ na-aka nká. Agbanyeghị, ha echekwala ogo ha kemgbe ọtụtụ puku afọ. Nwere ike ịhụ ọwa, ugwu slopes na ụfọdụ ọzara karst nke na-eme ka mbara ala bụrụ nke ha.
N'akụkụ ụfọdụ nke akụkụ ndị dị elu ọ ga-ekwe omume ịhụ ihe ịrịba ama ochie nke glaciations nwere ike ịhapụ na ihe akaebe mgbe ị na-ahụ nhazi nke ogige na ndagwurugwu n'ụdị U. Anyị na-echeta na ndagwurugwu n'ụdị V bụ ụdị nke Osimiri na ndị ahụ Ha dị ka U ma ọ bụ nsonazụ nke glaciers. E nwere ụfọdụ isi iyi nke mmiri ọkụ nke jupụtara na mineral.
Banyere nhazi ya, ụfọdụ mmiri enwetara site na Pyrenees nke sitere na Paleozoic na Mesozoic. Ka o sina dị, mgbanwe banyere ala ya sitere na Precambrian. Nhazi ya sitere na nkwekọrịta nke microcontinent Iberia na akụkụ ndịda nke Eurasia. Ha abụọ malitere ịgagharị ma bịaruo ibe ha nso ruo mgbe ha jikọtara ọnụ. N'ihi nkwekọrịta ahụ, eriri ahụ gbagoro ma mepụta ugwu ugwu. Nke a mere ihe dịka 100-150 nde afọ gara aga.
Ebe etiti Pyrenees mejupụtara tumadi Slate na granite onye nkume ya dị ihe dịka narị afọ abụọ. Ihe mejupụtara ya bụ limestone, sandstone, dolomite, na ụdị okwute ndị ọzọ dị iche iche.
Ifuru na anụmanụ nke Pyrenees
Dịka anyị kwuburu na mbụ, ndị Pyrenees nwere ụdị ndụ dị iche iche Rita bu n’obi echekwaba. Ihe dịka ahịhịa osisi 3.500 na-ebikọ ọnụ, nke 200 n'ime ha jupụtara. Ekwesiri iburu n'uche na umu anumanu di iche iche puru iche na ihe ndi ozo ma nwekwaa uru karie nchebe. Ebe oke mmiri ozuzo kariri na odida anyanwu n'ihi mmetuta nke Atlantic, anyi huru na ahihia di oke nma. N'aka nke ozo, Pyrenees nke owuwa anyanwu enweghi ike iguzogide otutu onu ogugu.
Osisi nke Pyrenees mejuputara oke ohia na ala ugwu nke umu ufodu di iche, dika osisi Carrascan, osisi di ala, osisi okwute na nkpuru osisi. N'etiti ụfọdụ pụrụ iche endemic umu nke a ecosystems anyị nwere osisi nke genus Xatardia.
Banyere ụmụ anụmanụ, ọ bụ ndị Iberian desman na-anọchi anya ya. Enwekwara ụfọdụ anụ ọhịa bea, na lynx Iberian, udele beard, Pyrenean newt, butterflies Erebia rondoui na mollusk Helicella nubigena.
Enwere ụfọdụ ebe a na-egwupụta ọla, kol na lignite na-adịkarị obere ịnweta akụ ma e jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ. Ọnọdụ akụ na ụba nke ebe a dabere na osisi na ahịhịa. Fọdụ A na-eji iyi mmiri emepụta osisi hydroelectric. A na-ewepụta Talc na zinc ebe a. Obodo ndị gbara ya gburugburu na-arụ ọrụ ugbo na anụ ụlọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Pyrenees na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Pyrenees